Fetin'ny fahaleovan-tena (avy amin'i Billy Mays, ShamWow ary HeadOn) | Martech Zone
Zoma, Jolay 4, 2008 Zoma, Jolay 4, 2008 Douglas Karr
Matetika ao an-tranonay ny televiziona, saingy tabatabany matetika no misy ao. Raha mijery fahitalavitra aho dia matetika ny Discovery Channel. Androany amin'ny herinandro izao, noho izany dia nandehandeha teny amin'ireo fantsona aho indraindray. Rehefa afaka kelikely, nanofa sarimihetsika fotsiny izahay. Ireto misy antony 3:
Manantena aho fa hikorontana ity lehilahy ity satria nisy nanindrona ny masony.
Nanokana tena taorian'ny nahitanao ny varotra 47 nataony.
Ny zavatra tokana tokony amidin'ity lehilahy ity dia ny loko volombava sy volombava.
Fanodinkodinana fotsiny ny dokambarotra mahatsiravina fa tsy marketing. Tsy fantatro izay manelingelina ahy bebe kokoa - ireo dokambarotra ireo na ny hoe tsy maintsy miasa izy ireo.
Tags: Directoriesrohyneo mammalian studiosmpanohana horonan-tsarysarety fiantsenana wordpress
Ny horonantsary faha-4 Jolay
Jul 5, 2008 amin'ny 10: 18 AM
Halako ny dokam-barotra Head On, saingy mandeha ny zavatra rehetra. Isaky ny manana aretin'andoha mafy tokoa aho dia hampiasaiko fa tsy handratra andoha intsony!